टुक्रिएको मुटु जोड्न सक्ने २५ वटा ब्रेकअप फिल्महरु कुन कुन हुन्? यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ - समय-समाचार
टुक्रिएको मुटु जोड्न सक्ने २५ वटा ब्रेकअप फिल्महरु कुन कुन हुन्? यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ
समय-समाचार शुक्रबार, २०७७ वैशाख १२ गते, २२:२२ मा प्रकाशित
Sometimes, in other words, what you need is notalove story butabreakup movie. Below, we’ve compiled 25 of the best breakup movies (in no particular order) to help you process your sadness, exorcise your rage, or encourage you to dust yourself back up and move the hell on. यदि यहाँ देख्नु भएन भने यहाँ क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ ।
साभार: मेशेबल अनलाईन